दिन प्रतिदिन महरा यौन दुव्र्यवहारको दलदलमा फस्दै, अदालतले दियो यस्तो आदेश ! – Sanghiya Online
दिन प्रतिदिन महरा यौन दुव्र्यवहारको दलदलमा फस्दै, अदालतले दियो यस्तो आदेश !
यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी ७ दिन अनुसन्धानको समय थप्दै परीक्षणका लागि रगत दिन आदेश दिएको हो ।
प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको डिएनए परीक्षण नगरी आरोपबारे अनुसन्धान गर्न नसकिने भन्दै आदेशको माग गरेका थिए । आजको नागरिक दैनिकबाट ।
काठमाडौं, । रोशनी शाहीलाई कोठामै पुगेर रक्सी सेवनपछि बलात्कारको प्रयाश गरेको र अस्वीकार गर्दा कुटपिटको आरोप लागेका तात्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिवादास्पद बयान दिएर फेरी चर्चामा आएका छन् । शाही बलात्कार प्रकरणमा महराले प्रहरी समक्ष दिएको बयान प्रश्नैपिच्छे बाझिएको छ । पक्राउ परेको लामो समयसम्म स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बयान दिन अस्वीकार गरेका महराले पछिल्लो पटक बयान दिन तयार भएका थिए । बयानका क्रममा शाहीको डेरामा भेटिएको भाँचिएको चस्माको बिषयमा पनि महरा चिप्लिएका छन । पहिलो पटक आफ्नो चस्मा नभएको बताएका महराले दोस्रो पटक पुरानो चस्मा देखाएर फसाउन खोजिएको बयान दिएका छन् । घटना घटेको पर्सिपल्ट अर्थात असोज १४ गते प्रहरीले शाहीको डेराबाट रक्सीको बोतल, शाहीसँगको घम्साघम्सीमा महराको भाँचिएको चस्माको खुट्टा, उनको जुत्ताको तलुवा लगायतका प्रमाण संकलन गरेको थियो । महराले भाँचिएको त्यही चस्माको खुट्टा आफ्नो पुरानो चस्माको भएको बयान दिएका हुन । ‘सुरुमा मेरो चस्मा लगाएकै छु, त्यो चस्मा मेरो हैन भन्ने बयान दिनुभएको छ, फेरि आफ्नो पुरानो चस्मा देखाएर फसाउने षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा पगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
चुनाबको मुखैमा कांग्रेसलाइ लाग्यो जोडदार झटका, सांषददेखि केन्द्रिय सदस्यसबै फोरममा प्रवेश
हिरास्तमा रामको कुटपिट गरी ज्यान लिने प्रहरीलाई निलम्वन गर्न जसपा नेता वृज किशोर यादवको माग ।